Fleet of Ellicott Dredges Nadiifinta Dhuxusha Ash, Daraasadda Kiiska Deegaanka
Nadiifinta Musiibada Dhuxusha ee TVA waxay jabisay Dhul cusub
Xigasho: Injineerka Wararka-Diiwaanka - ENR.com
Sida John Kammeyer, PE, Madaxweyne ku-xigeenka Maamulka Tennessee Valley ee gubista dhuxusha, wuxuu u kacay TVA's warshadda korantada dhuxusha ee 'KingA' 3:30 subaxnimo ee Dec. 23, 2008, wuxuuna "arkay dhammaan waxyaalaha xun ee wadada ka soo baxa" - in si gaar ah loo caddeeyo , 5.4 milyan cu yd oo dambas dhuxul ka balliga ash ee geedka - Kammeyer wuu ogaa isla markiiba inuu jiray cillad injineernimo.
"Weligay ma arkin wax sidaas oo kale ah," ayuu ka yiri dambaska dhuxusha qoyan ee ka daatay diikha habeenki ka horreeyay, oo buuxinaya Webiga Emory iyo balliyada u dhow, daboolaya waddooyinka iyo jidadka tareenka, isla markaana baabi'iyay 300 hektar oo dhul ah ku beero hadhaaga dambaska.
Laba sano iyo bar kadib, aagga weli si buuxda looma soo celin wixii ay khubaradu ugu yeereen musiibada ugu xun ee deegaanka ee nooceeda ah. Laakiin shaqaaluhu waxay awood u yeesheen inay ka soo jiidaan dhammaan dambaska muhiimka ah - qiyaastii 3.5 milyan cu yd - oo laga keenay Emory, oo tan iyo markii dib loo furay agagaarka agagaarka ash daminta. TVA ayaa hada diirada saareysa waxa ay ugu yeertay "wax aan muhiim aheyn" dambas saarista dhulka. Nadiifinta qashinka, oo lagu qiyaasay $ 1 bilyan ilaa $ 1.2 bilyan, ayaa la filayaa in la dhammaystiro sanadka 2014.
"Waxaan arki karnaa dhamaadka aragtida," ayuu yiri Bob Deacy, oo ah madaxweyne ku-xigeen sare oo TVA u qaabilsan nadaafadda Kingston. Tijaabooyinka tayada hawada iyo biyaha ayaan muujineynin in aysan jirin dhibaato weyn oo waqti dheer ah oo ku saabsan biraha culus ama wasakhda kale, in kasta oo tijaabooyinku socdaan. Wax liqid ayaa la arkaa iyagoo ku soo badanaya webiga qarkiisa; shaqaalaha goobta ayaa sheegaya in kalluumeysiga uusan waligiis ka fiicneyn.
Laakiin nadiifintu waa kala badh sheekada.
TVA waxay ku qarashgareysaa ilaa $ 2 bilyan si loo xasiliyo loona xiro keydka qoyan ee dhirteeda oo dhan loona beddelo dambaska dhuxusha ee keydinta qallalan, qorshe hami leh oo ay ka mid tahay dhismaha darbi jilicsan oo dhererkiisu yahay 80-ft oo qoto dheer oo ku wareegsan balliga dhuxusha-ash ee Kingston si looga hortago guuldarooyinka mustaqbalka. Kahor 2008, TVA balliyada dhuxusha-dambaska si sax ah looma dayactirin, maamulkuna wuxuu inta badan iska indhatiray calanka gaduudan ee ku saabsan balliyada, sida lagu sheegay warbixinta TVA ee 2009.
Iyada oo kuxiran natiijada ka soo baxda xeerarka Wakaaladda Ilaalinta Deegaanka ee dhigaya in dhuxusha la saaro kormeerka federaalka, dadaallada TVA waxay muujinayaan waxa xeerarka cusub ay u baahan karaan yutiilitida kale ee leh dhirta dhuxusha. Waqtigaan la joogo, qiyaastii 100 dhirta Mareykanka ah waxay leeyihiin qiyaastii 676 qoyan oo dul saar ah haraaga dhuxusha-dambaska, EPA ayaa sidaas leh.
Si kastaba ha noqotee, isbeddelada ku yimaadda yutiilitida kale uma badna in la sameeyo ka hor inta aan la soo saarin sharciga EPA ama Koongareesku ansixin inta laga sugayo sharciga dhuxusha.
Jim Roewer, oo ah agaasimaha fulinta, Utility Solid Waste Activities Group, oo ah shirkad koronto ku hogaamisa ayaa yiri "Marka la fiiriyo waxa meesha ku jira iyo xaddiga lacagta, hay'adaha korontada ma rabaan in lagu ciqaabo sameynta isbeddelada aan lagu taageerin xeerarka EPA". koox.
Adeegyada Adeegyada Deegaanka ee toddobada Ellicott® calaamadaha haraaga loo isticmaalay nadiifinta.